Tag: oku na-aga ime ihe | Martech Zone
Tag: oku ime ihe
Site na ọtụtụ nyocha na nyocha dị ka nke ha dị na Youtube, ọ dị ka enwere ohere furu efu site na ịghara inwe usoro ntụgharị ka mma agbakwunyere na vidiyo Youtube. Youtube ewepụtala kaadị iji weta mmekọrịta ndị ọzọ ebe onye na-emepụta vidiyo nwere ike itinye oku na ntinye na vidiyo ha na vidiyo. Otu ihe edere - Kaadị anaghị arụ ọrụ na mgbakwunye na nke ugbu a CTA overlays dị na Youtube. A bụ ihe Isi nke
Kwa izu na Edge nke Podcast Podcast, mụ na Erin na-ekwusi ike na mmejọ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere bụ na ha kwenyere na saịtị ha bụ broshuọ dị n'ịntanetị karịa onye dị ndụ, onye na-eku ume. Mgbe saịtị gị na-ewepụta ọdịnaya dị ukwuu nke na-adịbeghị anya, na-agakarị ma dị mkpa… ị na-ewulite ọkụ ma na-enyere ndị mmadụ aka ikwere na gị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Ọ dịkwa mkpa iburu n’obi na ekweghị m na mbata bụ